Countdowns DJ olo-malaza - NYE Countdown ho an'i Djs, Vjs, Nightclubs 2021
Nihalehibe teo ampitan'ny renirano nijery ny habakabaky Cincinnati any Newport, nahafantatra i KY DJ SAB nanomboka tamin'ny fahazazan'i 17 fa te ho ao anatin'ny orinasa fialamboly / DJ. Tao anatin'ny Paka hariva tamin'ny Oscars 1990 tao anaty efitrano tao Longworth Hall, izay nanombohan'ilay diany matihanina DJ ary 15 taona maro taty aoriana dia nahazo Pulse Nightclub izay miasa ao amin'io toerana io izy. Afaka mahita azy ny zoma sy asabotsy alina mijaly ao amin'ny Energy Nightclub ianao ary mampiantrano ireo hetsika lehibe indrindra amin'ny alim-pandihizana ao Cincinnati isan-kerinandro.
Rehefa mieritreritra DJ ianao mitondra zava-mampientam-po sy angovo ary zava-mitranga HETE amin'ny tri milaza ny anarana hoe DJ SAB dia miverina matetika. DJ SAB dia vevavy dimy ambin'ny folo taona teo amin'ny sehatry ny klioba ary nameno ny seranam-piaramanidina tao amin'ny Kiss 107 nandritra ny folo taona mahery. Nijanona tamina hetsika Cincinnati Reds nandritra ny vanim-potoana 8 izy ary nitazona ny anaram-boninahitra ofisialy DJ of the Cincinnati Reds. Ny Cincinnati Bengals dia nitoky sy nitady ny talentany tamin'ny DJ isan-taona amin'ny ekipan'ny ekipa ofisialy nandritra ny vanim-potoana efatra farany.
Nanomboka tamin'ny alàlan'ny mpilalao Dholi tamin'ny taona 1999, ary nandresy tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Duo roa tamin'ny taona 2003 & 2004 (Bhangra Fusion any Detroit, Bhangra Blowout any Washington DC), azo antoka fa hanohy ny faniriany i Deep amin'ny indostrian'ny mozika. Hankafy miaraka amin 'ny filalaovana RDB (Now Manj Music), Juggy D, B21, Balwinder Safri, Akshay Kumar, Badshah ary mpanakanto desi desièresy mahafinaritra maro hafa. Tamin'ny tapaky ny taona 2000 dia nanohy ny faniriany ny hamerina indray izy ary nanamboatra bhangra sy bolika mixtapes antsoina hoe "Absolut Bhangra" sy "Dance Radio Asia", araka ny filazan'ny fivarotana mozika desi no fivarotana cd avo be indrindra nataon'ireo mpanao remix.
Tao amin'ny 2010, Dholi Deep dia naniry fatratra ny faniriana fatratra an'i DJing, ary nandeha fitsangatsanganana an'izao tontolo izao niaraka tamin'i RDB sy Nindy Kaur any India / Dubai / New Zealand, izay nitarika ny fampisehoana nataony niaraka tamin'i Nindy Kaur ao amin'ny IIFA 2011 any Toronto. Dholi Deep, namoaka tamim-pomba ofisialy an'i "Singh N Kaur" tamin'ny horonantsary "Singh Is Bling" ao amin'ny 2015, ary manana 200 + namoaka sary tamin'ny anarany izy. Ny Deep ankehitriny dia manana ny laharam-pahamehany ORIGINAL voalohany izay namoaka tao amin'ny sora-baventy Zee Music Company "Peg Peg Peg", novokarin-dry zareo sy Manj Music, izay mampiseho ny mpanao rapper any India "Emiway". Ny hira dia efa niampita ny tontolon'ny 2 tapitrisa tao amin'ny YouTube tao anatin'ny fotoana fohy, ary nampanantenaina fa hiram-pandresena ho an'ny rock ny gorodona mandihizana. Afaka mahita bebe kokoa momba an'i DJ Dholi Deep ianao @ djdholideep.com
DJ Pauly D aka ilay OG Pauly D tany am-boalohany…
Amin'izao fotoana izao dia mihodina ao amin'ny Providence & Boston any amin'ny klioba sy ny hetsika ihany koa ny talen'ny fialamboly ho an'ny fialamboly biz. Ataovy mihodikodina ireo sy kambana momba ny 29 efa-taona izao. Amin'ny fomba ofisialy no hany olona nisolo ny onjam-peo SiriusXM telo andro isan-kerinandro avy tao Rhode Island koa niara-niasa tamin'ny mpanakanto sy indostria maro izay ny namako manokana izao. Tiako ny manohy mitazona ilay fety sy mamely ireo andiany mahatonga ny olona mandihy ary ny olona faly ho ilay hany hany hany hany DJ Pauly D
DJ Zisco nanomboka tamin'ny 2009 fony tany amin'ny tafika miaramila tany Afovoany Atsinanana, nanolotra serivisy ho an'ny tafika, ny mpiambina ny sambo, ary ireo rahalahiny sy anabaviny mitazona fitaovam-piadiana, ahafahany mivelatra sy mahavita milalao ho an'ny vahoaka marobe. DJ Zisco dia nilalao tany amin'ny firenena sy tanàna samihafa toa an'i Bahrain, Iraq, Qatar; Kuwait, NYC, Miami; Key West, Williamsburg sy Virginia Beach, VA. Avy any Cuba, dia afaka manao sy miteny amin'ny teny Espaniôla na anglisy, manome ny tsara indrindra amin'ny kolontsaina ary mitondra endrika mifangaro hafa amin'ny fety, mitazona ny gorodona fandihizana, hiantoka ny rehetra hanana fotoana mahafinaritra.
“Ny fahazoana manao olona ny fotoana mahafinaritra dia fahatsapana mahafinaritra. Ny fahafaham-ponao no laharam-pahamehana ahy ”-DJ Zisco